Imithi yotshwala nesilungulela: Kuphephile noma cha? - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Ezokuzijabulisa Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa Umphakathi, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Ukuphuma Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, Izindaba Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba
Main >> Imfundo Yezempilo >> Kuphephile yini ukuxuba utshwala nemithi yesilungulela?
UTaco ngoLwesibili ulapha futhi, futhi uhambe kancane olwandle i-carne asada nemargaritas. Kwakumnandi, kepha usuzokhokha imiphumela ngesilungulela esicasulayo sokudla nesilungulela. Ufinyelela iPepcid, kepha kukhona okukuvimba kumathrekhi akho. Usokhemisi wakho ukutshele ukuthi eminye imithi akufanele neze ixutshwe notshwala (futhi udakwe kancane). Ingabe imithi yesilungulela ingenye yazo?
Qhubeka uphumule — imithi yotshwala nesilungulela ayinakho ukuxhumana nezidakamizwa, futhi kuphephile ukuyiphuza uma ubukade uphuza, kusho uDkt. Holly Alvarado, Pharm.D., Usokhemisi wasemtholampilo UDuke Health . Kodwa-ke, kunemigede embalwa.
OKUSHIWO: I-Pepcid vs. Prilosec
Okuhlobene neTaco noma cha, isilungulela esivame kakhulu e-United States. Ngokwe-International Foundation for Gastrointestinal Disorders, kulinganiselwa ukuthi ngaphezu kuka 44% AbaseMelika baba nesilungulela njalo ngenyanga. Uphawu lwe i-asidi ye-asidi Esikhundleni sesimo uqobo, isilungulela senzeka lapho i-asidi yesisu ibuyela emuva emungeni.
Isilungulela singazizwa njengokushisa esifubeni sakho (ngemuva kwesifuba sesifuba) futhi sihambisane nokunambitheka okubi emlonyeni wakho, umuzwa ovuthayo emphinjeni wakho, futhi kwesinye isikhathi kube nzima ukugwinya.
Isilungulela esingapheli sivame ukuhambisana isifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD). Iphinde ihlotshaniswe nezinye izimo zezokwelapha eziningana, ngakho-ke thintana nochwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo uma uhlaselwa isilungulela kaningi.
Kubantu abaningi, ukukhululeka kwesilungulela kutholakala kalula ngemithi yokuthenga kanye / noma ngemithi kadokotela, efana nale:
Ama-antacids ayisisekelo, afana Maalox futhi UPepto Bismol
Ama-H2 blocker , njenge I-Pepcid (famotidine), I-Tagamet (cimetidine), futhi I-asidi (nizatidine)
I-Proton pump inhibitors njenge Prilosec(omeprazole) , I-Nexium (esomeprazole), Prevacid (lansoprazole), futhi I-Protonix(pantoprazole)
Ngakho-ke, imuphi kule mithi yesilungulela engcono kakhulu? UJohn Beckner, RPh, umqondisi omkhulu wezinhlelo zamasu we Inhlangano Kazwelonke Yosokhemisi Bomphakathi , ithi lokho kuya ngomuntu ngamunye. Usikisela ukukhuluma nosokhemisi ngakho kunokuba umane uthathe eyodwa eshalofini.
Sicela uthintane nosokhemisi wakho — ngicabanga ukuthi lokho kuhlala kuyindlela enhle, usho kanjalo, enezela ukuthi ama-PPIs nama-H2 blocker yimithi enamandla kakhulu futhi kuwukuhlakanipha ukuwasebenzisa ngokufanele futhi njengoba kunconyiwe.
Thola isigqebhezana esivela kudokotela
izinto ezidala ukuthi kuthiwe unamaphutha ekuhlolweni kwezidakamizwa
Inothi ngotshwala nezilonda
Futhi, qaphela ukuthi kufanele ugweme utshwala ngokuphelele uma unezilonda noma ezinye izinkinga ezinzima zesisu. Lokhu kungenxa yokuthi utshwala bungakhuphula ubungozi bokuphuma kwegazi, ekugcineni bube nesimo sakho Okuningi kunenkinga. Imithi oyiphuzayo ngalesi simo (njengePepcid) akuyona inkinga; kuyisimo uqobo, kuchaza uBeckner.
Gwema i-metoclopramide notshwala
Kwesinye isikhathi, isiguli singathola imishanguzo ye-metoclopramide, isisusa sokugaya isisu, ukwelapha isilungulela. Lokhu kuthathwa njengokusetshenziswa kwelebula okungekho kwelebula, okusho ukuthi ngenkathi i-metoclopramide kungelona ukwelashwa okugunyazwe yi-FDA kwesilungulela kulungile kudokotela wakho ukukunikeza ukuze anciphise lesi simo. Uma uthatha i-metoclopramide (eyaziwa nangokuthi i-Reglan) yesilungulela noma esinye isimo, kufanele ugweme utshwala ngoba bungathuthukisa imiphumela yotshwala ye-central nervous system (ikhanda, ubuthakathaka, ukukhubazeka kwengqondo, njll), kusho uDkt Alvarado .
Lezi zinxusa… zinamandla okudala imiphumela engemihle engathandeki lapho usebenzisa utshwala, usho kanje.
OKUSHIWO: I-Nexium vs. Prilosec
Gwema i-ranitidine notshwala
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-H2 blocker esetshenziswa njalo, i-ranitidine (igama lomkhiqizo i-Zantac) iyakhunjulwa ngenxa yokukhathazeka kokuphepha futhi ngo-Ephreli i-FDA yacela ukuthi isuswe kuwo wonke amashalofu ezitolo . Uma usenayo i-ranitidine kwikhabethe lakho lemithi, khuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo noma usokhemisi ngalokho okufanele ukwenze esikhundleni salokho.
Kepha emuva kulawo ma-margaritas. Inkinga enkulu uma kukhulunywa ngesilungulela notshwala ukuthi ukuphuza ngokweqile kungenza empeleni inhlamvu isilungulela, kusho uKristen Smith, MS, RD, okhulumela inhlangano I-American Academy of Nutrition kanye neDietetics .
Lapho uphuza kakhulu utshwala, maningi amathuba okuthi ube nesilungulela, kusho uSmith.
kufanele ngabe ushukela wegazi lakho ukuwuphi
USmith uthi iwayini elibomvu lingelinye lamacala amakhulu. Futhi, ngoba i-caffeine ingakwazi futhi kubangela isilungulela, qaphela ngokuphuza iziphuzo ezidakayo ezine-caffeine, njengekhofi laseSpain noma i-rum ne-cola, uyanezela. Uma inhloso yakho ukunciphisa amathuba akho okuba nesilungulela, ukunciphisa inani lotshwala obudlayo kungasiza, kuchaza uSmith. Kodwa-ke, uxwayisa nokuthi akubona nje kuphela utshwala obubalulekile.
Kufanele ucabangele konke ukudla neziphuzo ozidlayo, esho, enezela ukuthi ukudla okunamafutha kanye / noma okune-asidi, izithako ezibabayo, iminti noshokoledi nakho kuyizaphulamthetho ezinkulu uma kukhulunywa ngokushiswa yinhliziyo.
Futhi, akuzona izinhlobo zokudla kuphela ozidlayo — i- indlela odlayo kungadala isilungulela, futhi.
Ukudla ngokushesha okukhulu futhi ngamanani amakhulu kungandisa amathuba akho okuba nesilungulela, kusho uSmith.
Ubani onganikela ngegazi-futhi ngubani ongakwazi
Abilify vs. Rexulti: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
uhlu lwezidakamizwa ezinezixwayiso zebhokisi elimnyama
yini i-apple cider elungele impilo ehlakaniphile
i-levofloxacin 500 mg kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza
kungakanani i-melatonin okufanele uyilale
lisho ukuthini izinga eliphansi le-tsh